किन गर्यो फिफाले अर्जेन्टिना र ब्राजिल सहित ११ राष्ट्रलाई कारबाही ?
१९ आश्विन २०७३
१९ असोज । फिफाले ११ देशका फुटबल फेडेरेशनलाई कारबाही गरेको छ । विश्वको सर्वोच्च फुटबल संस्था फिफाले रसियामा हुने विश्वकप सन् २०१८ अन्तर्गत छनोट चरणका खेल दौरान समर्थकले उशृंखल र भेदवाभपूर्ण कार्य गरेको भन्दै ११ राष्ट्रका फुटबल फेडरेशनलाई कारबाही गरेको हो । कारबाहीमा पर्नेमा विश्व फुटबलका शक्तिशाली दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिना र ब्राजिल समेत परेका छन्। त्यस्तै पेरु, चिली र प्याराग्वेसमेत कारबाहमिा परेका छन्। त्यस्तै…विस्तृत समाचार »
एनआरटी डिभिजन ए मा बढुवा
१९ असोज, काठमाडौँ । न्युरोड टिम (एनआरटी)ले सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत मङ्गलबार भएको खेलमा सातदोबाटो युवा क्लबलाई पराजित गर्दै ‘ए’ डिभिजन फुटबल क्लबमा बढुवा भएको छ। हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को मैदानमा भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा एनआरटीले सातदोबाटोलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै पुनः ‘ए’ डिभिजनमा बढुवा भएको हो। अन्तिम खेलमा बराबरी भए पनि बढुवा हुने अवस्थामा रहेको एनआरटीले अन्ततः स्पष्ट जित…विस्तृत समाचार »
​१३ वर्षे काराकोको डेम्बेलेको तुलना मेस्सीसंग
१९ असोज । अरु खेलाडी भन्दा आधा उचाइका १३ वर्षे काराकोको डेम्बेलेले सोमबार राति स्कटिस क्लब सेल्टिकको २० वर्षमुनिको टिममा डेब्यु गरे । उनले हार्टस् क्लबविरुद्धको खेलमा ९ मिनेट मात्रै मैदानमा बिताए । यो खेलको डेब्युले उनी उदाउँदो फुटबल स्टार रहेको स्पष्ट छ । डेम्बेलेले सेल्टिकको स्कूले छात्र टिममा गरेको प्रदर्शनका कारण इन्टरनेटमा उनको चर्चा यसअघि नै चुलिएको थियो । सोमबार राति हार्टससँगको खेलमा सेल्टिक…विस्तृत समाचार »
अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिलीसहित ११ देश कारबाहीमा
१९,असोज । विश्व फुटबलको प्रशासकिय निकाय फिफाले ११ देशका फुटबल एसोसिएसनलाई कारबाही गरेको छ । फिफाले विश्वकप २०१८ को छनौट खेलको क्रममा गरेको समर्थकले गरेको असहयोग तथा भेदभावपूर्ण व्यवाहारका कारण ११ देशका फुटबल एसोसिएसनलाई जरिवाना तिराएको हो । फिफाले होन्डुरस, एल साल्भाडोर, मेक्सिको, क्यानडा, चिली, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, पाराग्वेय, पेरु, इटाली र अल्बानियालाई जरिवाना तिराएको हो । चिलीले सन् २०१७ मा मार्च २८ मा भेनेजुएलासँग हुने…विस्तृत समाचार »
सारापोभामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध १५ महिनामा घट्यो
१९,असोज । टेनिस खेलाडी मारिया सारापोभामाथि लोगको प्रतिबन्ध १५ महिनामा घटेको छ । खेल सम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सारापोभा माथिको प्रतिबन्ध १५ महिनामा घटाउने निर्णय गरेको हो । सारापोभामाथि अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस महासंघ आइटिएफले दुई वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आइटिएफले प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग गरेको पाएपछि सारापोभामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर खेल सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भने पाँच पटककी ग्राडसलाम विजेता सारापोभा माथिको प्रतिबन्धको समय…विस्तृत समाचार »
​विश्वकपमा ४८ टिम
१८ आश्विन २०७३
१८ असोज । विश्व फुटबलको प्रशासकीय निकाय फिफाका अध्यक्ष जानी इन्फान्टिनोले विश्वकप फुटबलमा सहभागी हुने टिमको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनाले विश्वकप फुटबलको अन्तिम चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टिमको संख्या ४८ पुर्‍याउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । इन्फान्टिनोले समूह चरणअघि प्रारम्भीक नकआउट प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसबाट १६ टिम समूह चरणका लागि छनौट हुने तथा १६ टिम बाहिरिने प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसपछिको प्रतिस्पर्धा…विस्तृत समाचार »
पञ्चकन्या तेजले चुम्यो इपिएलको उपाधि
१७ आश्विन २०७३
१७ असोज, काठमाडौं । एभरेष्ट प्रिमियर लिगको उपाधि पञ्चकन्या तेजले उचालेको छ । २०१४ मा भएको एनपीएल च्याम्पियन पञ्चकन्या तेजले सोमबार भएको फाइनल खेलमा कलर्स एक्स फ्याक्टरलाई ४० रनले हराउँदै ५ लाख पुरस्कार जितेको छ । । पञ्चकन्या तेजले दिएको १७२ रनको लक्ष्य पछ्याएको कलर्स १७.३ ओभरमा १३१ रन जोड्दै अलआउट भयो ।फैजुल रहमान पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा शून्यमा आउट हुँदा टिमको स्कोर मात्र १…विस्तृत समाचार »
बार्सिलोनाको अर्को हार , मेस्सी बिनाको टिम चौथो स्थानमा झर्‍यो
७,असोज । स्पेनिस ला लिगाको साविक विजेता बार्सिलोना लिग अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा पराजित भएको छ । सेल्टा डी भिगोले बार्सिलोनालाई ४–३ ले हराएको हो । लिगमा बार्सिलोनाको सिजनको यो दोस्रो हार हो । सेल्टाको मैदानमा पराजित भएको बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा मौका गुमायो । सेल्टाले पहिलो हाफमा ३–० को अग्रता लिएको थियो । २२ औं मिनेटमा पिओने सिस्टो, ३१ औं मिनेटमा लागो एस्पासले गोल…विस्तृत समाचार »
​गौरीशंकर बाल गृहमा आश्रितहरुलाई भद्रकाली स्पोर्ट्सको सहयोग
१६ असोज काठमाडौं, । लामो समयदेखि खेल सामाग्री र खेल पोशाकको व्यवसायमा संलग्न भद्रकालीस्थित भद्रकाली स्पोर्ट्स प्रा.लि. ले दोलखाको चरिकोटमा रहेको गौरीशंकर बाल गृहमा आश्रितहरुलाई सहयोग स्वरुप ट्रयाकसुट र टिसर्ट प्रदान गरेको छ । गौरीशंकरमा आश्रितहरुका लागि १६ थान ट्रयाकसुट र उत्तिनै थान टिसर्ट उपलब्ध गराइएको हो । भद्रकाली स्पोर्ट्सकी प्रोप्राइटर कृतिका सापकोटाले लामो दूरीका धावक रामसुन्दर कार्कीलाई आइतबार सामाग्री हस्तान्तरण गरिन् । बालगृहलाई हस्तान्तरण…विस्तृत समाचार »
​ ६ मिनेट भित्र दुई गोल
१६ असोज । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा चेल्सी विजयी भएको छ । चेल्सीले हल सिटीलाई २–० ले हराएको हो । चेल्सीको जितमा विलियन र डिएगो कोस्टाले एक एक गोल गरे । पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी भएको खेलमा ६१ औं मिनेटमा विलियनले गोल गर्दै चेल्सीलाई अग्रता दिलाए । त्यसको ६ मिनेटपछि कोस्टाले सुन्दर गोल गर्दै चेल्सीको अग्रता दोब्बर पारे । ६ मिनेट भित्रमा…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 98 99 100 101 102 Older Last ›
प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनमा गार्ड अफ अनर प्रदान
७ असार, काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीनमा गार्ड अफ अनर प्रदान गरिएको छ । भ्रमणको तेस्रो दिन चीनको ग्रेट हल अफ दि पिपुल्समा उनलाई गार्ड अफ अनर दिइएको हो । उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ पनि सँगै थिए । लगत्तै प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डललाई गरेको स्वागतप्रति धन्यवाद दिँदै द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनेमा जोड दिए ।
​नेपाली कम्युनिष्ट एकतालाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले आत्मसाथ गर्ने –प्रधानमन्त्री
७ असार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कुलद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता र सफलताले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आत्मसाथ गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन र समृद्धिमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका’ विषयमा सम्बोधन गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको उतारचढाव
​नेपाललाई योगको केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने : कावा प्रधानमन्त्री
७ असार, काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाललाई स्वस्थ आध्यात्मिक एवं योग केन्द्रको रुपमा विकसित गर्दै लैजान सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् । चौथो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा पतञ्जलि योगपीठले आज बिहान राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा गरेको कार्यक्रममा उनले आम जीवन पद्धतिका रुपमा योगको महत्वलाई उजागर गर्दै स्वस्थ नागरिक तयार पार्नका लागि नेपाललाई योग